Abaarta Kenya waxay horey u noqotay masiibo dabiici ah | Saadaasha Shabakadda
Abaaraha ayaa noqda kuwa soo noqnoqda oo daba dheeraada. Biyo la'aantu hadda maahan oo keliya, laakiin waa cudurrada iyo cilladaha ka dhasha taas oo dadka ku dhacda. Waxaa jira durbaba saddex milyan iyo bar Kenyan ah oo u baahan gargaar bini'aadanimo sababo la xiriira abaarta daran ee ku dhufatay dalka.
Xaaladda Kenya ayaa isu bedeshay cunto yari taariikhi ah oo ka jirta Bariga Afrika. Abaartu waxay yareysaa wax soo saarka cuntada waxayna kordhisaa cudurada.
Qiyaastii 22,9 milyan oo qof ayaa cunno yari haysata Soomaaliya, Koonfurta Suudaan, Kenya, Itoobiya iyo waqooyi-bari Nigeria, sida ay sheegtay UN-ka. Waxaan horey uga hadalnay halkan ku saabsan ku dhawaaqidii "aafada dabiiciga" ee ay soo saartay Dowladda Kenya 10-kii Febraayo. Digniintaan waxaa loo arkaa masiibo, maadaama wadanku ubaahan yahay gargaar dibadeed si uu awood ugu yeesho yareynta dhibaatooyinka iyo cilladaha jira. Abaarta hadda jirta waxay mareysaa 23 ka mid ah 47 degmo ee dalku ka kooban yahay. Intaas waxaa sii dheer, waxay ku dhacdaa muwaadiniinta iyo sidoo kale xoolaha iyo duurjoogta.
Ku dhowaad 344.000 carruur ah iyo in ka badan 37.000 haween uur leh iyo kuwa nuujinaya ayaa la liita nafaqo-xumo ba'an waxayna u baahan yihiin daaweyn degdeg ah. Kaliya laga bilaabo Maarso ilaa Maajo tirada carruurta ay hayso nafaqo-xumada ba'an ayaa kordhay 32%. Rajadu way sii yaraaneysaa dadka ku dhex nool masiibadan. Roobkii la filayay ma uusan gaarin. Roob ayaa da’ay inta udhaxeysa 50 ilaa 75% wax kayar intii lafilaayay, roobabkiina durba waa yaraadeen. Tani waxay keenaysaa inay kordhaan cunno yarida dalka taas oo ay ugu wacan tahay dalag la’aan iyo dhimashada xoolaha.
Intaa waxaa dheer, weli waxaa jira bisha Luulyo iyo Agoosto oo roobabku xitaa ka yaraan doonaan. Tan waxaa ku kordhay isbeddelka cimilada, taas oo kordhinaysa xoojinta iyo soo noqnoqoshada abaaraha, mana ahan biyo la'aan oo keliya. laakiin dhammaan dhibaatooyinka asalka ah ee ay ka kooban tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Abaaraha » Abaarta Kenya waxay horey u noqotay masiibo dabiici ah
Isbedelka cimilada wuxuu sababi karaa khasaarihii ugu weynaa ee hantiyeed Mareykanka